Shaja kabusha iselula kusuka ku-ING ngokushesha, okulula futhi okuphephile - Shaja kabusha iselula
Ibhange le-ING yibhizinisi lezezimali elinikeza amakhasimende alo akhethekile izinsiza zebhange eziqondile noma ze-elekthronikhi. Ungakwazi ukushaja kabusha iselula yakho ku-ING nge-akhawunti yakho yasebhange ngokufaka ngokuqondile kukhompuyutha yakho noma kumakhalekhukhwini wakho ngokulanda i-APP.
Ungakwenza ukushajwa kabusha kweselula okuvela kumabhange kagesi ukungena ku-akhawunti yakho yomuntu siqu. Khumbula ukuthi kumele ube yikhasimende lasebhange ukuze usebenzise lezi nezinye izinsiza ezihlinzekwa yisikhungo sezezimali. Uma uphelelwa ibhalansi, gcwalisa kabusha ulayini wakho ngokuphephile ngale sistimu.
Ukushaja kabusha iselula yakho kusuka ku-ING akukhiqizi noma iyiphi imali. Ngokusebenzisa ibhange eliwolintshi ukufaka ibhalansi, wonga isikhathi. Manje usungakwazi ukumboza zonke izidingo zakho zezezimali ngokusebenzisa izinsiza zokubhanga ku-inthanethi.
Shaja kabusha kusukela kukhompuyutha yakho
Uma usuvele uyikhasimende lebhange le-ING futhi ufuna ukushajwa kabusha ulayini wakho weselula ku-inthanethi, kufanele ufake usuka ku- web ku-ING ngqo. Okokuqala faka inombolo yedokhumenti yakho kamazisi noma ikhadi lokuhlala, ungazikhomba nepasipoti yakho.
Bese ufaka usuku lwakho lokuzalwa bese uchofoza "faka". Uma usukwazi ukufinyelela i-akhawunti yakho, uzoba nethuba lokuphatha ngokushesha zonke izidingo zakho, okuhlanganisa neselula yokugcwalisa evela kwa-ING.
Uma usungaphakathi kwe-akhawunti yakho, chofoza "kumikhiqizo yami", bese uchofoza "amakhadi" bese ucindezela "sebenza". Uma ulapho kufanele uchofoze esigabeni "sezinketho / ukushajwa kabusha kweselula". Ekugcineni faka inombolo yocingo ofuna ukuyishaja kanye nenani.
Shaja kabusha kusuka kuselula yakho
Ukushaja kabusha iselula kusuka ku-ING usebenzisa uhlelo lokusebenza kumakhalekhukhwini wakho. Ukwenza lokhu, kufanele ulande i-APP ku-APP store noma ku-Google Play. Itholakalela i-iOS ne-Android. Eyokugcina enezinguqulo 4.4 noma kamuva.
Uma une-Android landa futhi ufake i-APP kusuka lapha futhi wenze imisebenzi yakho ngokunethezeka. Ngemuva kokufaka uhlelo, luvule bese uchofoza endaweni yamakhasimende bese ufaka usuku lwakho lokuzalwa kanye nomazisi noma umazisi okufanele uwufake ngqo ku-ING.
Ekupheleni kwalesi sinyathelo, uzofaka isikrini esisha lapho kuzodingeka ukuthi ufake amakhodi akho okufinyelela, ngendlela efanayo naleyo oyenza ngayo lapho ufinyelela kukhompuyutha.
Uma uxhuma njalo, uhlelo lokusebenza luzolondoloza usuku lwakho lokuzalwa futhi ukuze uxhumeke okulandelayo uzodinga kuphela ukufaka ikhodi yokufinyelela.
Manje kufanele uphathe okudingayo kuphela ngedivayisi yakho. Ukushaja kabusha iselula kusuka ku-ING kulula, kulula futhi kulula. Vele wenze izinyathelo ezifanayo njengokuthi uphambi kwekhompyutha yakho, kodwa manje noma yikuphi lapho okhona.
Phezulu kuselula » Amabhange » Gcwalisa iselula kusuka ku-ING